Filimada TV-yada Big Hits Ka Noqdeen Tiger Zinda Hai v Judwaa 2 v Golmaal Again Isku Bar Bar Dhig Lagu Sameeyay – Filimside.net
Filimada TV-yada Big Hits Ka Noqdeen Tiger Zinda Hai v Judwaa 2 v Golmaal Again Isku Bar Bar Dhig Lagu Sameeyay
April 19, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: April 19, 2018
Shabakada BOI ayaa soo daabacday maqaal ay kaga hadleyso sedexda filim ee bilooyinkii ugu dambeeyay TV-yada gil gileen sidoo kalena Big Hits noqdeen qoysaska aad kaga heleen waa Tiger Zinda Hai v Judwaa 2 v Golmaal Again.
Golmaal Again iyo Judwaa 2 waxay ka mid noqdeen Blockbuster-da ugu weyn ee TV-yada si waali ah kaga gadmaan ilaa haatan qoysaska ka xiiso dhigi la’yihiin.
Golmaal Again iyo Judwaa 2 kaliya filimka Baahubali labadiisa qeybood ayaa darajo ahaan dhanka TV-yada kaga saameyn badan waana guul lixaad leh oo ay labadaan filim gaareen.
Xiligaan la joogo waxaa sii yaraanayaan dadka tiyaatarada u daawasho tagaan madaama qiimaa tikit-ka tiyaatarka lagu iibsado sanad walbo si joogto ah sare loogu sii qaadayo.
Golmaal Again Iyo Wacdaraha Uu TV-yada Ka Dhigaayo:
Golmaal Again ilaa haatan 50-milyan oo qoys ayaa TV-yada ka daawadeen ayadoo 5-jeer oo kala duwan Satelite-ka lagu soo cel celinaayay filimkaan ayadoo dalabaadka qoysaska uu aad u sareeyo.
Waxaana xusid mudan in Golmaal Again 20-milyan oo qof tikit u goosteen marka uu tiyaatarka saarnaa taasi oo muujineyso in dadka tiyaatarada soo aadayaan aad usii yaraanayaan sababo la xariiro sicirka tikitka filimka lagu iibsado oo marwalbo sare loo sii qaadayo.
Golmaal Again kaliya waxaa dhanka TV-yada kaga weyn filimka Bahubali – The Conclusion oo ay daawadeen 70-milyan oo qoys.
Dangal oo ah filimka Hindiga ah ee lacagaha ugu badan ebid soo xareeyay dhanka TV-yada waxaa daawadeen 36-milyan oo qoys taasi oo muujineyso in Golmaal Again qoysaska ka jecel yihiin Dangal madaama Golmaal uu yahay filim mada daalo dhameestiran leh.
Judwaa 2 Wacdaraha Uu TV-yada Ka Dhigaayo:
Varun Dhawan waa wiil yar laakiin aqoonsi lixaad leh ayuu qoysaska ka helay madaama filimkiisa Judwaa 2 ay daawadeen 42-milyan oo qoys waana tiro waali ah madaama wiilkan uusan weli Superstar noqonin weliba tiro shan jeer ah ayaa lagu soo cel celiyay filimkaan ayadoo aad u sareyso rabitaanka loo qabo.
Tiger Zinda Hai Iyo Wacdaraha Uu TV-yada Ka Dhigaayo:
Tiger Zinda Hai waxaa ilaa haatan TV-yada ka daawadeen 24-milyan oo qoys mudo labo jeer oo Satelite-ka lagu soo celiyay waxaana u harsan tirooyin kale oo dib loogu soo celin doono madaama qoysaska aad u rabaan filimkaan balse ma gaari doono darajada Golmaal Again laakiin Dangal iyo Judwaa 2 wuu dhaafi karaa darajo ahaan.
Isku Bar Bar Dhig Lagu Sameeyay iger Zinda Hai v Judwaa 2 v Golmaal Again Dhanka TV-yada:
Marka kowaad hawada lagu soo daayay
Judwaa 2 – 15-milyan iyo 266,000 qoys
Golmaal Again – 16-milyan iyo 352,000 qoys
Tiger Zinda Hai – 13-milyan iyo 704,000 qoys
Marka labaad hawada lagu soo daayay
Judwaa 2 – 9-milyan iyo 278,000 qoys
Golmaal Again – 15-milyan 871,000 qoys
Tiger Zinda Hai – 10-milyan iyo 396,000 qoys
Marka sedexaad hawada lagu soo daayay
Judwaa 2 – 6-milyan iyo 378,000 qoys
Golmaal Again – 8-milyan iyo 270,000 qoys
Tiger Zinda Hai – Weli Mar Sedexaad Laguma Celinin Daawashadiisa
Marka afaraad hawada lagu soo daayay
Judwaa 2 – 6-milyan iyo 453,000 qoys
Golmaal Again – 5-milyan iyo 52,000 qoys
Tiger Zinda Hai- Weli Mar Afaraad Laguma Celinin Daawashadiisa
Marka shanaad hawada lagu soo daayay
Judwaa 2 – 4-milyan iyo 759,000 qoys
Golmaal Again – 4-milyan iyo 676,000 qoys
Tiger Zinda Hai – Weli Mar Shanaad Laguma Celinin Daawashadiisa
Judwaa 2 – 42-milyan iyo 139,000 qoys
Golmaal Again – 50-milyan iyo 221,000 qoys
Tiger Zinda Hai – 24-milyan iyo 100,000 (2 daawado oo kaliya dhanka TV-yada)
Waxaa Aqrisay 694